Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa sheegay inay ka xun yihiin dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaa’ib – STAR FM SOMALIA
Maamulka Galmudug ayaa baaq ka soo saaray dagaal labo maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaano ku dhow dhow degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Maxamed Xaashi Carabey oo ah Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa sheegay inay ka xun yihiin dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaa’ib
Waxaa uu sheegay inay u dirayaan ergo nabadeed, si ay u kala dhex galaan labada beelood ee ku dagaalamay deegaankaas
“Maamulka Galmudug waxaa uu ka xun yahay in la daadiyo Dhiiga Dadka Muslimiinta ah hadana Soomaalida ah ee wada dhashay”ayuu yiri Carabeey.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka inay u istaagaan sidii loo baajin lahaa dagaalka.
Inta la og yahay illaa ruux ayaa ku dhimatay dagaalka ka dhacay deegaano ku dhow dhow Cadaado, waxaana dagaalka u dhaxeeyay dad reer miyi ah.
Deegaanada Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ku soo noq-noqonayay dagaal beeleedyada salka ku hayay muranada dhul daaqsimeedka iyo ceelasha, waxaana ku geeriyooday dad fara badan.